Økonimi/Dhaqaale Arkiver - NorSom News
Ruushka oo korontada ka jaraya dalka Finland.
Abdirisak Hassan - 14. mai 2022
Kala bar dadka Norway kunool oo lagula taliyay inay arrintan iska hubiyaan.
Yuusuf Bootaan - 12. mai 2022
Telenor: Ha furin hadaad fariintan hesho.
Norsomnews - 7. mai 2022
NAV: Shaqaale yaraan ayaa Norway ka jirto.
Norsomnews - 1. mai 2022
Daawo Barnaamij gaar ah oo ah macluumaad ku saabsan waraaqda canshuur celinta ee( skatte-melding)
Abdirisak Hassan - 13. april 2022
BOOLISKA OO KA DIGAYO FARRIIMO DHAC IYO IS DABAMARIS AH
Mohamed Bashiir - 11. april 2022
Maxkamadda sarre: Dadka daroogada qabatima, looma ciqaabi karo arrintan.
Norsomnews - 9. april 2022
Qalad cusub: NAV oo lacag kala hartay 505 qof oo naafo-shaqo ah.
Bangiyada Norway oo la hordhigay Shuruudo adag.
Mohamed Bashiir - 7. april 2022
Wargalin: Shir looga hadlayo fursaddaha iyo caqabaddaha Maalgalinta Norway ee Soomaaliya oo khamiistan Oslo ka dhacayo.
Norsomnews - 20. mars 2022
Qareen soo jeediyay in wasiirka shaqada ee Hadija Tajik ay xilka ka degt: Sababtan awgeed.
Norsomnews - 22. februar 2022
Dowlada oo dhaqan-galisay xeer shirkadaha ku cadaadinayo shaqo-siinta shaqaalaha «Vikar»-ka ah.
Norsomnews - 1. januar 2022
Dowlada oo dhaqaale 1, 8 milyan gaaraya ka joojisay ururka lagu muransanyahay ee HRS.
Norsomnews - 22. september 2021
Espen Nakstad oo taajir ku noqday Corona
Tagaasileyda Norway oo sadex(3) arrimood cabasho xoogan ka muujiyay: Hoos u dhac xoogan
Norsomnews - 28. juli 2021